China bandeeji nkpuchi igwe Manufacturer factory na-emepụta | Idocha
Bandeeji nkpuchi igwe Manufacturer
Automatic elu na-agba imi p ...
Iru mmiri egosi kaadị mmadụ ...
Thickened aluminum foil akpa ...
3 G 5 g 10 g 100 g nke silica g ...
Naịlọn agụụ akpa ntụpọ trans ...
Bandage nkpuchi igwe bụ oru oma adịgide adịgide ịgbado ọkụ akụrụngwa maka ụgbọelu nkpuchi. Ọ na-bụ-eji maka nkịtị ịgbado ọkụ nke na-abụghị kpara ụgbọelu nkpuchi. Ọ nwere ike ịgbanye bandage nke ụdị dị iche iche nke mkpuchi ụgbọelu. Ọ bụ tumadi na ọdabara na nkịtị ịgbado ọkụ nke 2-oyi akwa na-abụghị kpara akwa ụgbọelu nkpuchi, 3-oyi akwa na-abụghị kpara akwa ụgbọelu nkpuchi, ọgwụ ụgbọelu nkpuchi, 4-oyi akwa ọrụ carbon ụgbọelu nkpuchi na mgbochi nje ụgbọelu nkpuchi.
A na-ejikọ njikọ njikọta akụrụngwa na ngwaọrụ nchọpụta. Ọ bụrụ na enwere mmejọ na usoro ọrụ ahụ, ihe mmetụta ahụ ga-achọpụta na akpaghị aka na mkpu ma kwụsị igwe. N'otu oge ahụ, a ga-egosipụta njikọ mmebi ahụ na ihuenyo ngosipụta akụrụngwa, nke na-eme ka arụmọrụ mmepụta ahụ dịkwuo mma.
The bandeeji ụdị nkpuchi igwe adopts na ultrasonic ịgbado ọkụ usoro, na a na-ebu ngwaọrụ atọrọ na igwe n'elu ikpo okwu. A na-esite na ngwaọrụ ahụ na-ebubata ihe ndị a na-emepụta nke ọma, mgbe ahụ, ebipụ bandeeji mgbe a na-agbanye ya site na wiilị ifuru ultrasonic, iji wepụta ngwaahịa ndị agwụla. Naanị otu onye ka achọrọ iji tinye ihe nkpuchi ọkara ahụ na eriri ebu nke igwe, ma ndị ọzọ na-esochi ọrụ a mechara na-akpaghị aka.
Na-arụ ọrụ ike ọkọnọ Ugboro abụọ 220
Ngwa akụrụngwa 3000W
Na-arụ ọrụ arụmọrụ Mbadamba 25-30 / min
Igwe igwe 1920 (L) x 900 (W) x 1200 (H) mm
Igwe dị arọ 300kg
1. A na-eme okpokoro a nke alloy nke aluminom na igwe anaghị agba nchara, nke di nfe ma mara mma n’aja.
2. Automgụzi akpaka nwere ike ijikwa arụmọrụ na ọganihu.
3. Nchịkwa ntụgharị oge, nke nwere ike ịgbanwe ọsọ ọsọ nke akụrụngwa dịka mkpa ndị ahụ dị.
4. Sere gbọmgbọm nri, ọzọ ziri ezi n'ọnọdu, nwere ike ịchịkwa obosara nke ngwaọrụ ka kacha nta na-azọpụta na-eri.
5. Ogologo na oke nke ngwaahịa ndị a gwụchara kwesịrị ịchịkwa n'otu, na ntụgharị nke ± 1 mm, nke nwere ike ịchịkwa ogologo nke ngwaahịa ndị agwụla.
6. Akụrụngwa na-akpaghị aka nke ukwuu ma na-achọ ihe dị ala maka ndị na-arụ ọrụ, ya mere, ọ bụ naanị ihe dị mkpa ịhapụ ihe ma dozie ngwaahịa ndị agwụla.
7. Anụ arụmọrụ na-adaba adaba ọrụ.
8. The akpaka ultrasonic ịgbado ọkụ wheel ka nke dị elu-edu ígwè, na ogologo ọrụ ndụ na-eyi ndị na-eguzogide.
Nke gara aga: Iru mmiri egosi kaadị emeputa ahaziri 6-ebe iru mmiri kaadị gburugburu ebe obibi
Osote: Cup ụdị, cup ụdị ọkara akpaka nkpuchi igwe, ọkara akpaka cup ụdị nkpuchi igwe
Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe
Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd. Njikọ
Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Anti Static Afọ Cloth, Packaging Afọ akpa, Uhie Uhie Uhie, Nkpuchi Manufacturer, Igwe nkpuchi ihu,